Nike + Run Club, yakagadziridzwa kuti ikwane Apple Watch Series 4 | Ndinobva mac
Kana paine chishandiso chinoshanda mushe paApple smart wachi kune avo vanofarira kumhanya, ndiyo Nike app, NRC (Nike + Run Club). Iyi Anwendung ichangowana nyowani mhando 5.19 uye inowedzera kugadzirisa kweApple Watch Series 4, ingave iyo Nike modhi kana kwete.
Zviripachena, zvakajairwa Kugadziriswa kwe bug uye kugadzirisa kwese mune iyi vhezheni itsva yeapp. Vazhinji vashandisi vanonakidzwa neichi chishandiso kuti vaende vachimhanya vasina iyo iPhone on uye zvimwe ikozvino sezvo isu tine iyo LTE modhi inowanikwa
Las kugadzirisa kwakaitwa mune iyi vhezheni itsva ivo vari:
Yakagadziriswa shangu yekumaka chiitiko. Iye zvino zvave nyore kuwana uye kuwedzera shangu nyowani. Teedzera kumhanya kwese, kureba, pakati nepakati uye nguva yeimwe neimwe shangu
Pinda neshangu dzako ipapo pamberi pejaho neKurumidza. Gamuchira zviyeuchidzo kana iwe uchisvika padenga rako chinangwa kune yega peya shangu
Yakagadziridzwa kuenderana uye maficha eiyo nyowani Apple Watch Series 4 modhi
General bug kugadzirisa uye kugadzirisa
Isu tinowana vhezheni itsva ichangoburitswa muchitoro cheapps chero Apple smart wachi: iyo Apple Watch Series 2 iyo Series 3 uyezve, iyo Apple Watch Series 4 Nike +. Mu Series 1 uye Series 0 (yepakutanga) modhi zvinokwanisika kugadzirisa uye kunakidzwa nemumhanzi uye mamwe mabasa anopiwa neapp, asi isu tinofanirwa tora nesu iyo iPhone painoshaikwa GPS. Chero zvazvingaitika, chakakosha ndechekuti iyo nyowani vhezheni inovandudza mashandiro echikumbiro icho chinonakidza kune avo vanoita kumhanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nike + Run Club, yakagadziridzwa kuti ikwane Apple Watch Series 4
Julen gutierrez akadaro
Mhoroi ini ndichawana iyo apple wachi yakateedzana 3 (GPS) uye ini handina zano kana ndichigona kurodha kunyorera.
Pindura Julen gutierrez
Dell anounza iyo Ultra-yakafara, yakakombama 49-inch Monitor.